Saamaynta Blogging ee Raadinta Noolaha | Martech Zone
Saamaynta Blogging ee Raadinta Noolaha
Talaado, Nofeembar 21, 2006 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Shakhsiyaad badan iyo shirkado badan uma aqoonsana awoodda wax lagu qoro barta wax soo saarka ee suuq geynta. Mid ka mid ah faa'iidooyinka aan jeclaan lahaa inaan ku siiyo waa muhiimadda ay leedahay raadinta dabiiciga ah (dadka isku dayaya inay kugu helaan iyada oo loo marayo makiinadaha raadinta) iyo saameynta baloogga.
Waxaan hayaa laba goobood oo aan isbarbar dhigo, Xisaabiyaha Lacagta iyo Saameynta iyo Is-dhexgalka. Xisaabiyaha Payraise waa goob deggan oo aan waxyaabaha ku jira si joogto ah loogu hagaajin karin. Waxaa jira shuruudo gaar ah oo raadin ah oo loo yaqaan 'Payraise Calculator' oo lagu helo marar badan. Waxaad ku arki doontaa tan natiijooyinka raadinta dabiici ahaaneed ee loo maro Google ee goobta ku taal waqti ka dib shaxda soo socota. Waxaan sameeyay xoogaa Mashiinka Raadinta oo waxaan bedelay qaar ka mid ah waxyaabaha dhawaan ku jira.
Xisaabiyaha Payraise - Mawduuc Ma guurto ah
Sababtoo ah waxa ku jira On Influence ayaa isbeddelaya maalin kasta, xaddiga ereyada raadinta ayaa sii socota inay is beddesho. Waxyaabaha lagu daray ayaa ka dhigaya goobta 'la heli karo' ereyo badan oo raadin iyo ereyo muhiim ah. Sababtoo ah waxa ku jira ayaa sii wadaya inay is beddelaan, goobta waxaa hubiya matoorada raadinta inta badan oo dib loo tiriyaa iyadoo lagu saleynayo natiijooyinkaas Ogsoonow isbeddelka ku yimid raadinta dabiici ahaaneed ee loo marayo Google waqti ka dib:
Saameynta iyo otomaatigga - Mawduuc firfircoon
Haddii aad jeclaan lahayd inaad sameyso isla warbixintan adoo adeegsanaya Google Analytics, waxaad aadi kartaa tixraaca isha (kiiskan, Google), deji taariikhdaada kala duwan, ka dibna riix fallaarta laba-laabka ah oo xulo 'Xogta Waqtiga Dheer':
Ku soo dhowow Blogosphere, Paul